Teta! | Septemba 8, 2002
GỤỌ NKE Afrikaans Arabic Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Ewe Finnish French German Greek Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Japanese Korean Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Turkish Ukrainian
“Nọgidenụ na-arịọ, a ga-enyekwa unu; nọgidenụ na-achọ, unu ga-achọtakwa; nọgidenụ na-akụ, a ga-emeghekwara unu. N’ihi na onye ọ bụla na-arịọ na-anata, onye ọ bụla na-achọkwa na-achọta, a ga-emeghekwara onye ọ bụla nke na-akụ.”—LUK 11:9, 10.
N’IGOSI ntụkwasị obi zuru ezu n’okwu Jizọs Kraịst bụ́ nke e hotara n’elu, ọtụtụ Ndị Kraịst na-echigharịkwuru Chineke n’ekpere banyere nsogbu na nchegbu ha dị iche iche, na-enwe obi ike na ọ hụrụ ha n’anya ma na-eche banyere ha. Otú ọ dị, ụfọdụ na-enwe obi nkoropụ ka ha nọ na-echere ka a zaa ekpere ha. Ì chere na ekpere gị enweghị isi? Chineke ọ̀ na-ege ntị mgbe ị na-ekpe ekpere?
Ọ bụrụgodị na o yie ka a zaghị ekpere anyị, nke a apụtaghị na Chineke anụghị ha. Bible na-emesi anyị obi ike, sị: “Anya Jehova na-elekwasị ndị ezi omume, ntị ya dịkwa n’arịrịọ ha na-arịọsị ike.” (1 Pita 3:12) Ya mere, Jehova Chineke na-anụ ekpere ndị ezi omume, ma è kpepụtara ha ekpepụta ma è kpere ha n’ime obi. (Jeremaia 17:10) Jehova na-enyochakwa echiche na mmetụta na-akpali ekpere ọ bụla, nke ọbụna onye ahụ na-ekpe ekpere nwere ike ọ gaghị aghọtazu ma ọ bụ mara.—Ndị Rom 8:26, 27.
Otú ọ dị, ekpere aghaghị iru ihe ụfọdụ a chọrọ ma ọ bụrụ na Chineke ga-anabata ya. Nke mbụ, a ghaghị ikpegara ya nanị Chineke—ọ bụghị Jizọs, onye “senti” ma ọ bụ arụsị. (Ọpụpụ 20:4, 5) A ghaghịkwa ikpe ekpere n’aha Ọkpara Chineke, bụ́ Jizọs Kraịst. (Jọn 14:6) Nke a ọ̀ pụtara na Jizọs na-ebu ụzọ nụrụ ekpere anyị nakwa na ọ na-ezigara Chineke ozi dị na ya? Ee e. Kama nke ahụ, site n’ikpegara Jehova ekpere n’aha Jizọs, anyị na-egosi na anyị bụ ndị na-eso ụzọ Kraịst, anyị na-ekwetakwa na ọ bụ nanị n’ihi mgbapụta sitere n’aka ya ka anyị nwere ike ịbịaru Chineke nso.—Ndị Hibru 4:14-16.
A ghaghị iji okwukwe na-ekpe ekpere. Onyeozi bụ́ Pọl kọwapụtara, sị: “Ma okwukwe adịghị ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị [Chineke] ezi mma, n’ihi na onye na-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị, nakwa na ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ.” (Ndị Hibru 11:6) Olee otú mmadụ sị ama ma ò nwere ụdị okwukwe ahụ? Otu onye so dee Bible, nke bụ́ Jems na-aza, sị: “M ga-egosikwa gị okwukwe m site n’ọrụ m.” (Jems 2:18) Ee, okwukwe na-eduga n’ịrụ ọrụ, ọrụ ndị ahụkwa, n’aka nke ọzọ, na-egosi na anyị hụrụ Chineke n’anya ma na-agbalị ime ihe ga-atọ ya ụtọ.
Ndị na-efe Chineke ofufe aghaghị ịnọgide na-ekpe ekpere. Jizọs mere ka nke a pụta ìhè na Luk 11:9, 10, bụ́ nke e hotara ná mmalite. E kwuwerị, o bụrụ na mmadụ na-ekpe ekpere nanị otu ugboro banyere otu ihe, nke a ọ́ dịghị egosi na ihe ahụ ọ na-arịọ adịghị ya mkpa n’ezie?
Ihe Chineke Kwere ná Nkwa
N’agbanyeghị ugboro ole anyị na-ekpe ekpere nakwa otú anyị si na-ekpesi ya ike, anyị ka na-ebi n’ime “oge pụrụ iche nke siri ike obibi.” (2 Timoti 3:1) Ọ bụ ezie na Jizọs kwuru na ụmụazụ ya ga-enwe obi ụtọ, o kwughị na ha agaghị enwe nsogbu ná ndụ ma ọlị. (Matiu 5:3-11) Otú ọ dị, o kwuru na ndị na-eso ụzọ ya pụrụ inwe obi ụtọ n’agbanyeghị iru újú, agụụ, akpịrị ịkpọ nkụ, ma ọ bụ mkpagbu.
Obi ụtọ nke Jizọs kwuru okwu ya adịghị adabere n’ọnọdụ anyị ịbụ ndị kwesịrị ekwesị. Kama nke ahụ, ọ bụ afọ ojuju onwe onye nke anyị na-enwe n’ihi na anyị na-ejere Chineke ozi. N’ihi ya, anyị pụrụ inwe obi ụtọ ruo n’ókè ụfọdụ ọbụna n’ime oké ọgba aghara.—2 Ndị Kọrint 12:7-10.
Ịhụ Maka Nsogbu Onwe Onye
Ya bụrụ otú ahụ, ọ̀ bụ ihe na-enweghị isi, bụ́ ikpegara Chineke ekpere maka mkpa onwe onye ndị dị ka ịchọta onye òtù ọlụlụ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ ịhụ maka nsogbu ezinụlọ, nsogbu ahụ́ ike ma ọ bụ nsogbu metụtara ọrụ? Ee e, n’ihi na, ọ bụ ezie na Chineke adịghị ekwe nkwa ịgbanwe ọnọdụ ndụ anyị n’ụzọ ọrụ ebube, ọ ga-enye anyị amamihe iji nagide ha. Jems dere n’ihe banyere ọnwụnwa, sị: “Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n’ime unu, ka ọ nọgide na-arịọ Chineke, n’ihi na o ji mmesapụ aka na-enye mmadụ nile ihe, n’akọchaghịkwa akọcha; a ga–enyekwa ya.” (Jems 1:5) Ya mere, Jehova ga-eduzi anyị site na mmụọ nsọ ya. Nke a ga-enyere anyị aka ịghọta na itinye ụkpụrụ Bible n’ọrụ mgbe anyị na-eme mkpebi dị iche iche.
N’ezie, mmụọ Chineke adịghị emere anyị mkpebi. Kama ya, a chọrọ mgbalị onwe onye. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu, ànyị emewo nchọpụta banyere ya ma nyochaa ihe nile metụtara ọnọdụ ahụ? Nke a ga-abụ ọrụ ga-egosi Chineke na anyị nwere okwukwe. (Jems 2:18) Ànyị anọgidewo na-agbalị idozi nsogbu anyị, nọgide na-arịọ maka nduzi Chineke? (Matiu 7:7, 8) Ànyị ejiriwo nlezianya nyochaa ụkpụrụ Bible ndị metụtara ọnọdụ ahụ? Okwu Chineke pụrụ ime ka anyị “ruo eru n’ụzọ zuru ezu, bụrụ ndị a kwadebere n’ụzọ zuru ezu maka ezi ọrụ nile ọ bụla.”—2 Timoti 3:16, 17.
Ọ bụ ezie na Chineke nwere ike itinye aka n’ihe omume ụmụ mmadụ ma wepụ nsogbu nile anyị nwere, o nyewo anyị ohere iji ikike anyị nwere ime nhọrọ mee ihe. N’ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị na–eji ikike ime nhọrọ ha nwere eme ihe n’ụzọ na-emerụ ndị ọzọ ahụ́. N’ihi ya, ụfọdụ n’ime nsogbu ndị anyị na-ekpe ekpere maka ha pụrụ ịdịgide ruo mgbe ụwa ọhụrụ Chineke ga-abịa. (Ọrụ 17:30, 31) O nwere ike ịbụ ọnọdụ nke dị n’ógbè ebe anyị bi, ihe dị ka ime mpụ ma ọ bụ ibu agha; ma ọ bụ ọ pụrụ ịgụnye anyị ịtachi obi n’ihe isi ike nke ndị mmegide kpatara. (1 Pita 4:4) Anyị aghaghị ikweta na n’ime ụwa a nke na-adịghị asọpụrụ Chineke, ọnọdụ ụfọdụ agaghị aka mma.
Ka o sina dị, Chineke hụrụ ndị na-efe ya ofufe n’anya, ọ chọkwara inyere ha aka. Mgbe Alaeze ya ga-amalite ịchị ụwa n’enweghị ihe ịma aka, ọ ga-ewepụ kpam kpam ajọ nsogbu nile nke ụwa a. (Mkpughe 21:3, 4) Ma ka ọ dịgodị, anyị kwesiri ịnọgịde na-arịọ maka nduzi ya iji hụ maka nsogbu dị iche iche a na-enwe ná ndụ. Ọ bụrụ na anyị emee otú ahụ, anyị pụrụ ijide n’aka na Jehova ga-emezu nkwa ahụ e dekọrọ na Bible n’Aịsaịa 41:10: “Atụla egwu gị ka m nọnyeere; elela anya gburugburu n’ụjọ, n’ihi na Mụ onwe m bụ Chineke gị: M ga-agba gị ume; ee, M ga-enyere gị aka; ee, m ga-eji aka nri nke ezi omume m kwagide gị.”
Olee uru ikpe ekpere mgbe niile ga-abara gị?
Ibi n’Etiti Ọha Mmadụ Na-atụfukarị Ihe
È Nwere Ihe Ngwọta Dịnụ?
Otú Ị Pụrụ Isi Nagide Nsogbu nke Ibi n’Etiti Ọha Mmadụ Na-atụfukarị Ihe
Ihe Mberede Ụgbọala—Ị̀ Nọ Ná Nchebe?
Ebe Dị Nchebe Maka Obibi Bible
Mgbe Chi Jiri n’Ehihie
Ndị Ọkachamara n’Ikpofu Unyi n’Ala Ụmụ Ahụhụ
Ị̀ Na-enwe Nchegbu Banyere Ntutu Isi Gị?
THE BIBLE'S VIEWPOINT Ekpere Ndị Chineke Na-anụ
Ndị Nọ N’afọ Iri Na Ụma Na-ero Ụra—Ọ̀ Bụ Ihe Na-akpata Nchegbu?
Iji Teta! Mee Ihe n’Ụzọ Dị Irè
Gee Ntị Ma Mụta Ihe
Ọ̀ Bụ Anụ E Ji Mere Enyi nke A Hụrụ n’Anya Ka Ọ̀ Bụ Ajọ Ogbu Ọchụ?
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu TETA! Septemba 8, 2002
TETA! Septemba 8, 2002
3 Olee Otú E Kwesịrị Isi Na-ekpe Ya?